Siyaasi SD ka tirsan oo ka faalloday aftidii laga qaadey dalka Iswiiserland - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhinaca HAA oo wargeysyada ku daabacay "In 50 sano kadib ay dadka iswiiska ahi dalkooda ku noqon doonaan dad laga tiro badan yahay haddii xaalku sidaan ku sii socdo". Sawirle: Daniel Alling/Sveriges Radio
Siyaasi SD ka tirsan oo ka faalloday aftidii laga qaadey dalka Iswiiserland
La daabacay måndag 10 februari 2014 kl 13.50
Johnny Skalin oo ah siyaasi xisbiga Sverigedemokraterna u fadhiya guddiga EU ayaa ka faaloodey aftidii dhowaan laga qaadey dadweynaha dalka iswiiserland oo ku saabsaneyd in la xannibo shisheeyaha dalkaas soo galaya iyo in kale. Siyaasigaan SD wuxuu sheegay in ay tahay wax wanaagsan in uu jiro dal Yurub ku yaal oo dimoqraadiyadda si dhab ah u eegaya sida dalka Iswiiserland oo mar walba afti u qaada arrimaha dadka tooska u khuseeya. Wuxuuna ku faraxsan yahay natiijadii halkaas ka soo baxday:
- Dadweynuhu codkooda ayey aragtidooda ku muujiyeen. Waxaana u arkaa in ay xushmad ku mudan yihiin. Waxaan kaloo qabaa in ay wax wanaagsan tahay in doodi ka bilaabato Yurub oo dhan oo aysan Iswiiserland keli ah ku ekeyn. Sidee ayaan dooneynnaa in Yurub u ekaato? Sidee ayaanse ku xallin karnaa dhibaatooyinka jira? Sida muuqata aqlabiyada dadweynaha Iswiiserland waxay u arkaan in ay dhibaatooyinkaani aad waaweyn yihiin oo u baahan yihiin in wax laga qabto. Kolkaas waa in aan madaxa ku haynnaa in Iswiiserland uu yahay dal dhaqaalihiisu wanaagsan yahay. Sidaas oo ay tahay ayey haddana u arkaan in loo baahan yahay in wax laga qabto shisheeyaha farabadan oo dalka ku soo qulqulaaya.
Wareysi: Hewa Abdelzadeh/SR International